musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Kobe Bryant Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nhau yeLate NBA Legend yakadanwa "Black Mamba". Icho chinyorwa chizere cheKobe Bryant Childhood Nyaya, Biography, Vabereki, Chokwadi chemhuri, ruzivo rwehupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva panguva yaakange ari HAPANA kusvika paakazova a gamba & ipapo, HAPACHINA.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatambi vepamutambo we basketball nguva dzese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveKobe Bryant's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kobe Bryant Nyaya Yehucheche Nyaya:
Ngano yaimbova basketball mutambi ane mazita Kobe bhinzi bryant akazvarwa pazuva 23, Nyamavhuvhu 1978 kuguta rePhiladelphia muPennsylvania. Aive wechitatu pavana vatatu akazvarwa kuna mai vake Pamela Cox Bryant uye kuna baba vake Joe “Jellybean” Bryant (aimbova mutambi webhasikiti).
Ngano yebhasikiti - yakanzi "Kobe" nevabereki vake mushure memombe yavo yakakurumbira yekuJapan inonzi "Kobe" - yaive nyika yeAmerica yedzinza rakasanganiswa nemhuri dzemuAfro-America. Kobe mudiki akatanga kurerwa kwaakaberekerwa muPhiladelphia kwemakore matanhatu Joe Bryant (muriritiri) aendesa mhuri yake kuguta reRieti kuItari kuenderera mberi nebasa rake rebhasiketi padanho repasi.
Yakanga iri kuItaly kuti Kobe aive nemazuva mazhinji ehudiki hwake achikura pamwe chete nevakoma vake vakuru Sharia Washington uye Shaya Bryant-Tab. Paaive kuEuropean nyika, Kobe aida uye aifarira basketball, mutambo waakatanga kutamba muPhiladelphia pazera ramakore 3. Iye mukomana mudiki akabva apiwawo kutamba nhabvu uye akatsigira Italian side AC Milan sekirabhu yake yehudiki.
Akapedza chikamu chikuru chehudiki hwake achikurira muItari.
Kobe Bryant Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Zvido zvaBryant zvainyanya kutenderedzwa kuenda kubasketball iyo yakatamba nemoyo wese apo mhuri yakatanga kugara kuguta reReggio Emilia kuNorth Italy. Hazvina kutora nguva refu asati aita pfungwa dzake kuti anyatso tarisa pakutamba basketball uye akawana maropafadzo emhuri yake inotsigira.
Iwe unoziva here kuti Bryant aigara achidzokera kuUS munguva dzechirimo kuzotamba mu basketball zhizha ligi? Hunhu hwake hwaive hwakakura kwazvo zvekuti aive naasekuru vake veku US kumutumira vhidhiyo yemitambo yeNBA nechinangwa chedzidzo. Chokwadi, iye ipapo basketball prodigy akadzidza nezvekwaari kuenda (NBA) kubva kure uye akadzidziswa nesimba kurarama kurarama kuzadzisa zviroto zvake.
Semukomana mudiki, akadzidziswa kupinda muNBA kure Italy.
Kobe Bryant Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Panguva yakazodzoka mhuri yaBryant kuPhiladelphia muna1991, akange anyoresa kuLower Merion High School kuArdmore, Pennsylvania kwaakawana pfungwa mukati meJunior gore rake uye akatumidzwa kuti Pennsylvania Player yeGore.
Chiizve? Kobe akabatsira Lower Merion High Chikoro kuhwina mumakwikwi ehurumende, ayo ekutanga kubva makore makumi mana nemashanu uye akaramba achive mutambi-wenguva dzose anotungamira mukorori muSoutheastern Pennsylvania chikoro chepamusoro nhoroondo
Ona kuti ndiani akachinja mhanza dzeLower Merion High Chikoro muma1990.
Kobe Bryant Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Pamusoro weBryant's inoshamisa track track muchikoro chesekondari basketball, akatanga kukwezva zvido kubva kumakoreji akadai saDuke, North Carolina, Michigan neVillanova. Nekudaro, akaramba zvavakapihwa uye akafunga kuyedza mhanza yake mune 1996 National Basketball Association (NBA) dhizaini.
Sezvineiwo, Bryant akanyoreswa kupinda muNBA naCharlotte Hornets iyo yakamupa kuchikwata chake chehudiki chaanofarira - Los Angeles Lakers muchibvumirano chekutengeserana. Hazvina kutora nguva refu asati aita dheti yake mumwaka wa1996-97 'NBA' ndokupinda marekodhi semutambi mudiki pane vese akambotamba mumutambo we'NBA '.
Yakanyorwa naCharlotte Hornets asi akatengesa kuchikwata chake chehudiki chaanofarira - Los Angeles. Mumwe anogona kufungidzira mufaro waakanzwa.
Kobe Bryant Rise Kuenda Mukurumbira Nhau:
Ehe, Bryant anga asina mwaka unoonekera kwazvo wekutanga. Nekudaro, iye akawana mukurumbira weiye wepamusoro-flyer uye akazova mudiwa wevanofarira kuhwina 1997 Slam Dunk Contest. Bryant pakutanga akawana budiriro mumwaka wake wechipiri (1997-98 'NBA') paakashanda nzira yake yekuve iye mudiki All-Star munhoroondo yeNBA aine makore 19.
Akasimbisa mukurumbira wake waakawedzera mumakore akatevera uye akatungamira maLakers mumakwikwi matatu akatevedzana eNBA kubva 2000 kusvika 2002. Kusvika paakasiya basa muna 2016, Bryant anozivikanwa kuve mumwe wevanotyisa mikwende muNBA uye kazhinji aienzanisa achienzaniswa Micheal Jordan iye waakafananidza mutambo wake shure.
Zvikonzero nei akafananidzwa naMicheal Jordan zvakange zvisiri kure kutorwa. Kunyanya kana mumwe achidzidza uyu mufananidzo wengano mbiri.
Kobe Bryant Hukama Hupenyu Chokwadi:
Bryant aive - kune chikamu chiri nani cheakakurumbira makore maviri-gumi basa neThe Lakers - vanochiva nekuve nevanasikana avo vakarohwa nenyeredzi mukurumbira wake. Asi mumwe musikana akabudirira kukwidziridza chimiro chake chehukama neyeye panguva iyoyo basketball player. Haasi mumwe munhu kunze kwemukadzi waBryant Vanessa Laine Bryant. Bryant akasangana naVanessa mu2 paakagadzirira mimhanzi yake (hongu, akaitawo mimhanzi).
Vakadanana mushure mezvo uye vakachata muna 2001. Mubatanidzwa wavo uyo wakamira nguva yekuedzwa wakambotyisidzirwa muna 2011 apo Vanessa akamhan'arira kurambana. Neraki, ivo vakave murume nemukadzi zvakare muna 2013 uye vakagara vachifara ipapo kusvika Bryant zvakashata zvikaitika musi wa 26 Ndira 2020.
Kobe Bryant nemukadzi wake Vanessa vakaroora kweanoda kusvika makumi maviri emakore.
Kufa kwaKobe Bryant:
Kobe Bryant akashaya panjodzi yake yepamhepo yekuchengetera vanhu padivi pegomo kuCalabasas, mushure mekunge iye nevamwe vasere, kusanganisira mwanasikana wake wechidiki ane makore gumi nematanhatu Gianna Maria-Onore Bryant, akabva kuJohn Wayne Airport. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Gianna aive ari kuuya bhasiketi uyo akadzidziswa nemumwe munhu kwete baba vake.
Gianna angadai akave anotevera mukadzi bhasiketi kunzwa dai asina kufa mutsaona yeherikoputa yakaurayawo baba vake.
Vamwe vana vakazvarwa naBryant neVanessa muchato vanosanganisira; Natalia Diamante Bryant (akazvarwa muna 2003), Bianka Bella Bryant (Akazvarwa 2016) naCapri Kobe Bryant (Akazvarwa 2019). Kuvhunduka kwekufa kwaBryant naGianna kwakanyanya zvekuti mukadzi wake nevanasikana vasara vachiri kuzozvidhonza pamwe chete panguva yekunyora. Zvichakadaro, zvinotarisirwa kuti Vanessa nevanasikana vake vachaburitsa chirevo paruzhinji pamariro aKobe Bryant.
VERENGA LeBron James Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Kobe Bryant nemukadzi wake nevanasikana pamberi pekuzvarwa kwaCapri Kobe Bryant.
Kobe Bryant Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Huge matarenda haangotangise aripo. Ivo vakaita saBryant, akarerwa nemhuri inotsigira. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yaKobe Bryant.
Nezve baba vaKobe Bryant:
Joe "Jellybean" Bryant ndiye baba wenganonyorwa basketball ngano. Joe aive iye, aimbove mutambi weNBA akasiya musangano panguva yeKobe achiri mudiki kuenderera nebasa rake rebhasikiti padanho repasi muItari. Yakanga iri kunze kwezita remadunhurirwa raJoe "Jelly Bean" iro zita repakati raKobe "Bean" rakaumbwa. Ivo vanotsigira baba ve3 vakabatsira mukumuka uye kubudirira kwemwanakomana wavo mumwechete mubhasikiti. Joe, uyo anoshanda semurairidzi webasketball panguva yekunyora anoshungurudzwa naKobe Bryant Rufu. Chokwadi kurasikirwa kwemwanakomana wake mumwe chete uye muzukuru kwakamukurira kuti atakure.
Nezve amai vaKobe Bryant:
Pamela Cox Bryant ndiamai vaKobe Bryant. Iye anozivikanwa sehanzvadzi yeyaimbove mutambi weNBA Chubby Cox apo muchato wake kuna Joe Bryant nekusimuka kwaKobe Bryant kwakasimbisa mukurumbira wake munyika yebhasikiti. Kufanana nemurume wake, Vanessa aive nehukama hwepedyo naKobe Bryant kubva pamazuva ake ehudiki kusvika pazuva rekupedzisira kufa kwake. Anobatana naJoe uye nemhuri yese yeBryant mukuchema kufa kwemwanakomana wavo ane mukurumbira. Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti Kobe Bryant aidiwa naamai vake. Muchokwadi, nyika haigone kumirira kunzwa vabereki vaKobe Bryant vachitaura nezvehunhu hwake panguva yemariro.
Mufananidzo wepamoyo waKobe Bryant nevabereki vake.
Nezve hama dzaKobe Bryant:
Kobe Bryant ndiye ega mwanakomana akaberekwa kuvabereki vake. Akakurira mumhuri yepakati-yemhuri mamiriro ekugara aine hanzvadzi mbiri dzakura dzinozivikanwa saSharia Washington naShaya Bryant-Tabb. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve Sharia kunze kwekuti iye akaroora aine vana 2. Shaya akaroora uye ane vana vatatu. Kufanana nevabereki vavo, Sharia naShaya vachiri kuzoita pachena panhau dzekufa kwehama dzavo pamwe nekurasikirwa nemuzukuru wavo Gianna.
Kobe Bryant nehanzvadzi dzake mbiri dzakura Sharia (kuruboshwe) naShaya (kurudyi). Haiwa vaimuda zvakadii!
Kure kure nehupenyu hwemhuri hwaKobe Bryant, ongororo kumadzitateguru ake uye mumhuri midzi inoratidza kuti vanasekuru vake vaive Joseph Washington Bryant naGeorgia Marie apo sekuru vake naambuya vaive John Arthur Cox II naMildred Williams zvakateerana. Babamunini vengano yebhasikiti Chubby Cox uye mukoma John Cox inyanzvi dzebhasikiti panguva yekunyora. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pababamunini vaBryant nepo babamunini vake nababamunini vachiri vasati vaonekwa panguva yekunyora iyi bio.
Kobe Bryant Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Bryant Fans uye vanobatana nepasi rese vanobata zvimwe chokwadi kuti zvinyatsozviratidza nezvehunhu hwake. Izvi zvinosanganisira rake anoshamisa basa tsika, fanika, rupo uye anonamira munhu.
Ngano yeBasketball iyo yakanga isina matambudziko kuburitsa chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwepachivande uye hwomunhu akasimudzira zvinoverengeka zvezviitiko sekufarira kwake uye zvekuita. Zvinosanganisira kutamba nhabvu, kufamba uye kupedza nguva nemhuri yake neshamwari.
VERENGA Karl-Anthony Towns Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Aida nhabvu uye aive anotevera anofarira mitambo yepamusoro yenhabvu.
Kobe Bryant Lifestyle Chokwadi:
Wakanga uchiziva here kuti Kobe Bryant aive nechero mari inofungidzirwa inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora kumusoro kusvikira panguva yekufa kwake? Kupa hova kune chikamu chiri nani chepfuma yake yaive mibairo uye mubairo waakawana kubva kune rake ramakore maviri-gumi. Akawanawo mari yakawandisa kubva kumabhizimusi uye akawana mari yakawanda kubva kubhizimusi rake.
Saka nekudaro, Bryant akange asinganetse nekurarama hupenyu hwoumbozha. Aitova nedzimba mbiri dzemhando yepamusoro - kuOrange County muCalifornia - dzaisvika pamadhora mapfumbamwe emadhora. Icho chizere ruzivo kuti Bryant aiwanzo bhururuka ari ega ega helikopta kuenda kumitambo uye aive nemota dzinotyisa dzakakodzera kwazvo hunhu hwake senge iyo 9 Italia pakati pevamwe vatasvi vakakwira.
Aive nazvo zvese. Haana kudaro?
Kobe Bryant Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Kobe Bryant nyaya yehucheche nyaya zvakare biography, hezvino zvishoma zvisingazivikanwe kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezve ngano.
Kobe Bryant akapiwa kuputa uye kunwa asati afa. Nekudaro, akapinza tsika idzi zvine mwero uye zvaisazivikanwa kuti aive nematambudziko ehutano akamuka kwavari.
Vabereki vaKobe Bryant vakamurera mumusha wechiKristu uye vazhinji vemhuri yake maKaturike. Kobe akararama kutenda kwechikatorike uye akatoita kuti muchato wake utungamirwe nemupristi muchechi yechikatorike. Izvo zvakatemwa zvinoratidza chokwadi cheBryant nezvekatorike uye kuzivikanwa semuKristu.
Bryant, sevakanyanya kubudirira vemitambo, aive nematoo kana hunyanzvi hwekuita muviri kupedzisa kukwirira kwake kunoshamisa kwemamita matanhatu nemasendimita. Zvinotarisirwa pakati pehunyanzvi hwemuviri ndiyo Korona uye Wings tattoo paruoko rwake rwerudyi.
Matatoo ake aive ake ega.
Hupenyu nekusimuka kwaKobe Bryant kwaive kukurudzira kumuka kwevamwe basketball geniuses yakadai Kevin Durant, Kyrie Irving, uye Stephen Curry. Iye zvakare anokudzwa kwazvo LeBron James ichiri rapper Lil Wayne yakanzi rwiyo "Kobe Bryant" mushure make.
Kufarira kwaBryant mumhanzi kwakadzokera kumazuva ake echikoro chesekondari apo aive chikamu cheboka rap rakanzi CHEIZAW. Akaenderera mberi nekuburitsa imwe chete, "KOBE '", iine supermodel Tyra Banks uye akaverengerwawo muTaiwanese muimbi Jay Chou's single, "Iyo Denga nepasi Dambudziko".
Nezve kuita kwake kwescreen, Bryant akaita kuoneka paNickelodeon sketch comedy nhevedzano "Zvese izvo muna 2000". Akawonekerawo paMTV's Ridiculousness mu2019 uye akahwina mubairo weChikemy we Best Animated Pfupi Firimu yeiyo firimu rake "Anodiwa Basketball".
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kobe Bryant Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu.